पूर्व प्रेमी/प्रेमिकाका लागि रुँदा तौल घट्छ – Education Awareness
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार ०७:०२
च्यार्लोट, १८ बैशाख ।
हामी तनावमा हुँदा कार्टिसोल हर्मोनको श्राव हुन्छ जुन मोटोपनासँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि यो हर्मोनले तनावसँग जुध्न सहयोग गर्छ । यहाँ समस्या के छ भने आजकाल मानिसहरु जीवनयापनका लागि शारिरिक क्रियाकलाप गर्दैनन् । मानिसहरु तनावमा हुँदा र रिस उठेका बेला बसिराख्न रुचाउँछन् त्यसकारण हाम्रो शरीरले तनाव कम गर्ने केही क्यालोरीको उपयोग गरिसकेको ठान्छ । यद्यपी, त्यसको प्रयोग नभएको पनि हुनसक्छ ।
त्यसकारण जब हामीले आफ्ना भावनालाई नदबाइकनै, मन खोलेर रुन्छौं तब यी हर्मोन बाहिर निस्कन्छन् जसका कारण कार्टिसोलको स्तर घट्ने गर्छ । कार्टिसोल हर्मोनलाई कसरी कम गर्ने तरिका थाहा नहुँदा समस्या निम्तिने हो । त्यसकारण तनावमा भएका बेला हामीलाई अत्यधिक भोक लाग्छ जसका कारण तौल बढ्ने गर्छ । यसका लागि विज्ञानलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ जसले समस्यामा पर्दा पनि तौल घटाउने उपाय पत्ता लगाएको छ । स्ट्रेस हर्मोन शरीर भित्र छ कि बाहिर, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार भावनामा बगेर रुने सबैभन्दा राम्रो समय भनेको बेलुका सात देखि १० बजेसम्म हो । यतिबेला मानिसहरु आफूलाई मनपर्ने मानिसको साथमा हुन्छन् । त्यसकारण यदि तपाईंको सम्बन्ध टुटेको छ र जीवनको निकै कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई बाहिर निस्कन दिनुहोस् । मन खोलेर रुनु दिमागलाई शान्त बनाउने एक माध्यम पनि हो । स्रोतः ब्राइट साइड
चट्याङ पर्दा नगर्नुहोस यस्ता काम	२६ चैत्र २०७५, मंगलवार २१:५५
सन्दर्भः १६ दिने महिलाहिंसा विरुद्धको अभियान बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउँदै	१० मंसिर २०७५, सोमबार ०८:२२
आफ्ना बच्चालाई नहप्काउनुस, रोगी हुन सक्छन	६ भाद्र २०७५, बुधबार २१:२८
विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? असल जीवनसाथी कसरी छान्ने ?	५ भाद्र २०७५, मंगलवार २१:४४
औषधीय महत्व पनि छ, तुलसी प्रयोगमा थाहा पाउनुहाेस्	८ श्रावण २०७५, मंगलवार ११:५५